Nezvedu - Shijiazhuang Tidy Fashoni Kutengesa Co., Ltd.
Rainwear-Pvc / Polyester Inonaya jasi
Rainwear-Nylon mvura inonaya
Shijiazhuang Tidy Mufashoni Kutengesa Co.yakavambwa muna 2011. Muridzi ane makore anopfuura makumi maviri ruzivo rwekutengeserana rwekunze uye yedu yekugadzira nzvimbo, isu tave kugadzira nekutsvagisa zvigadzirwa zvakasiyana zvekutumira kune vatengi pasi rese. misika yedu mikuru inosanganisira Europe, North neSouth America, Africa, neAsia.
Parizvino, zvinhu zvedu zvikuru zvinosanganisira mbatya dzinoshanda, kunaya kwemvura, zvigadzirwa zvekunze, zvigadzirwa zvemumba, zvigadzirwa zvekusimudzira uye zvinhu zvepurasitiki. Isu tinopa zvigadzirwa izvi musarudzo dzakasiyana siyana, mamakisi, mavara uye masitaera. Iwe une chokwadi chekukwanisa kuwana chimwe chinhu chinokwana zvaunoda. Uyezve, isu tinotora kutonga kwehunhu zvakanyanya. Kuongorora zvigadzirwa mukati meyese yekugadzira, tinokuvimbisa kuti isu tinongopa chete zvemhando yepamusoro zvinhu.
Sezvo kambani yedu inowedzera mumisika yakawanda tiri kutsvaga vatsva vatengesi. Ndapota taura nesu zvino nematsamba ako akazara. Chero mibvunzo ichafadzwa kwazvo.
Shijiazhuang Tidy Mufashoni Co, Ltd. inyanzvi inonaya mvura uye mbatya dzekugadzira zvigadzirwa kunze. Inowanikwa kuchamhembe kweChina, padyo neBeijing. Isu tiri imwe yekutungamira inogadzira kuchamhembe kweChina kwemarudzi ese eRainwear, Outwear, Baby chinhu nezvimwe zvinhu zvepurasitiki
Tine yedu fekitori repurasitiki muguta redu. Vachishandisa vanopfuura mazana maviri vashandi, makumi matatu evashandi ava vane chekuita nehunyanzvi nzira (td), mhando yekudzora (qc) uye manejimendi maitiro. Nepo nhengo dzeTD dzese dziine makore makumi maviri ezviitiko zvine chekuita nazvo, vashandi veQC vari zvakare nyanzvi pakuronga kugadzirwa uye kuronga kuendesa kurongeka. isu hatina kungounganidza chete hupfumi hwenyika hwekutengeserana, asi zvakare takunda mukurumbira wevatengi nemaitiro edu ehana pamusoro pebasa.
Zvigadzirwa zvedu zvinofukidza: PVC, PEVA, EVA, PE, PVC / Polyester / Pvc, 100% Nylon rainwear, Nylon (Taffeta / Oxford / Ripstop), 100% Polyester (Taffeta / Micro / Twill), 100% Cotton, T / C mbatya, nyoro goko mabhachi, nezvimwe. isu tine mukana wakakwana mumutengo, mhando, uye nguva yekuendesa. Uku ndiko kwedu kwakasarudzika uye kukuru mukana.
Kwete. 151 Zhongshan kumadokero Road, Shijiazhuang, China